Xiisadii ka dhalatay arinta Cristiano Ronaldo oo gaadhay meeshii ugu saraysay & Laacibiin badan oo la saftay kadib markii…. – Puntlandtimes
Xiisadii ka dhalatay arinta Cristiano Ronaldo oo gaadhay meeshii ugu saraysay & Laacibiin badan oo la saftay kadib markii….
NAIROBI(P-TIMES)- Xidiga heerka caalami ee reer Germany Emre Can ayaa si weyn u amaanay saaxiibkiis kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo, isagoo dhinaca kale garab istaag xoogan u muujiyay dabaaldegii muranka dhaliyay uu ku hor sameeyay kooxda Atletico Madrid.
Xiriika kubada cagta ee qaarada yurub ee UEFA ayaa baaritaano ku bilaabay dabaal dagii Cristiano Ronaldo uu ku hor sameeyay jamaahiirta kadib saddexleydii uu kaga dhaliyay kooxda Atletico Madrid kalnkii lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga ayaa daabacay wareysi dhinacyo badan taabanaya uu bixiyay Emre Can, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa.
“Ma doonayo inaan qiimeyno dabaaldega Cristiano Ronaldo, laakiin kadib dabaaldagii Diego Simeone ee kulankii lugta hore, waa in uu sameeyaa fal celin shaqsi sida Ronaldo oo kale”.
“Marka loo fiiriyo qaab ciyaareedka fiican uu ku soo bandhigay kulankan, waxaa u furan inuu u dabaaldego sida uu doono”.
“Qof kasta ee ku sugnaa garoonka dhexdiisa ayaa ka war qabay cida dabaaldagan loogu tala galay, waxaan la qaataa isaga wakhti aad u fiican, waxaana ku faraxsanahay saddexleydii uu dhaliyay”.
“Lugtii hore ma aysan u fiicneyn isaga, wuxuuna la kulmay dhaleeceyno xoogan, wuxuuna doonayay inuu ka jawaab celiyo arintaas, waxayna noqotay jawaab celintiisa inuu dhaliyo saddexley aan marna la rumeysan karin”.